Igumbi lokurenta eSterntaler FW
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKarin
Iimitha ezingama-400 kuphela ukusuka kwi-Elbe Cycle Path uya kufumana intuthuzelo kunye nokwamkela iindwendwe kwindawo ezolileyo, ephakathi kwendlela enye. Ukongeza kwiivenkile zokutya, uya kufumana ivenkile yebhayisekile kunye neeresityu.
Eli gumbi limnandi likumema ukuba uhlale ixesha elide. Imigangatho emidala yamaplanga yendlu eyakhiwa ngo-1890 isixelela ngamaxesha adluleyo. Umntwana omnye okanye ababini banokulala kwigumbi elincinane. Ibhedi yesofa iyafumaneka apha. Indawo yokuhlala kunye neyokulala ixhotyiswe ngomgangatho omhle we-laminate. Iisilingi eziphakamileyo zine-flair ekhethekileyo. Lilonke, indawo yethu yeeholide ikhululekile kakhulu, ilula kwaye intle ngokulula.
4.73 · Izimvo eziyi-11
Enye yeenqaba ezimbalwa ezishiyekileyo, iindawo zokutyela kunye neekhefi zikwindawo ekufutshane. Izinto ezininzi zokuzonwabisa zenza ukuba iholide yakho ibe yinto ekhethekileyo. Abathandi bendalo kunye neengcali zezilwanyana banokufumana iindidi ezininzi kwi-UNESCO biophere reserve Elbe M-V river landscape. Umzila wamanzi waseMüritz-Elde umema bonke abathandi bamanzi kukhenketho lokufumanisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Karin
Sinokufumaneka lula ngefowuni ephathwayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dömitz